Las Médulas, Lova Iraisam-pirenena | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | León, Inona no ho hita
España Manana endrika mahafinaritra maro izy ary ny sasany tsy asan'ny natiora fa an'ny olombelona sy ny asany tsy tapaka eto an-tany. Izany no tranga antsoina hoe tontolo iainana Las Medulas, iray amin'ireo haren'ny Castile sy Leon.
Las Médulas dia ao amin'ny faritr'i El Bierzo, any León, ary ny sary dia voasokitra avy amin'ny fitrandrahana notohizan'ny Romana. Hatramin'ny 1997 dia dinihina Lova eran-tany ary nanomboka ny tsangambato voajanahary Espaniôla tamin'ny 2002. Fantatrao ve izy?
2 Tsidiho ny Las Médulas
Ity faritany ity dia manafina volamena ary Tsy ny Romana ihany no nanararaotra azy fa ny olona teo aloha iza no nahita ilay tranonkala. Saingy tsy isalasalana fa ny Romana no nanararaotra io toerana io tamin'ny fomba tsy miova sy voalamina. Inoana fa ny fanararaotana dia nanomboka tamin'ny andron'ny mpanjaka Augustin Augustus teo anelanelan'ny taona 26 sy 19 talohan'i JK, fotoana nandresen'ny Romanina ny saikinosy.
Pliny the Elder, mpanoratra latina ary miaramila maty tamin'ny taona 79 am.fan.ir., dia voalaza fa tratran'ny entona noho ny fipoahan'ny Vesuvius, izy no mpitantana ny harena ankibon'ny tany fony izy mbola tanora. Nilaza izy fa vy metaly 20 60 kilao no namela ireto toeram-pitrandrahana ireto isan-taona, manodidina ny XNUMX ireo mpitrandraka nofidina, izany hoe, nafahana teo aloha, ireo olona afaka ankehitriny, izay tsy maintsy niasa hamelom-tena.
Ny tahiry volamena dia nilaozana tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary tsy misy asan'olombelona, ​​ny zavamaniry dia nandroso ambanin'ny fananganana. Avy eo dia tonga ny fambolena chestnut, izay nampiasaina hamelomana ny mpiasa ary ny hazo avy eo dia nankany amin'ny fananganana eo an-toerana, dia mbola misy ohatra taloha ihany ankehitriny, ka amin'ny farany sy rehefa mandeha ny fotoana dia nisy endrika malaky teo anelanelan'ny mena sy ny maitso, miaraka amin'ny lagoons.
Rehefa natolotra ho World Heritage Site i Las Médulas dia nanohitra izany ny solontena avy any Thailand satria tsy vokatry ny natiora izany fa an'ny tanan'olona, ​​fanararaotana ratsy azy io, saingy nahazo ny toerany ihany tamin'ny farany.
Tsidiho ny Las Médulas
Raha tsy fantatrao mialoha ny tantaran'ilay toerana dia ny fomba tsara indrindra hanombohana ny fitsidihana dia ny Efitra arkeolojika. Eto no ahafantarantsika ny fitrandrahana volamena, ny teknikan'ny asa ilaina amin'izany, ny fomba nampitan'ny Romana ny rano ary ny nanovan'ny asa rehetra an'ity tontolo ity mandrakizay. Tena mahaliana. Amin'ny ankapobeny, ny fomban'ny Romanina dia ny fanonganana ny tendrombohitra sy ny fanangonana ny volamena amin'ny sivana.
Antsoina hoe ny fomba Rava Montium ary izy io dia nisy ny fananganana tambanjotran-tseranana hitondrana rano avy any amin'ny tendrombohitra avo ka hitahiry izany any an-tendrombohitra izay hararaotina. Tao amin'ireto farany dia noforonina ny galeran'ny cul-de-sac, avy eo nararaka ny rano, niakatra ny tosidran'ny rivotra ary tamin'ny farany nipoaka ilay tendrombohitra. Ny tanimanga sy ny rano avy eo nosasana tamin'ny fantsona hazo ary nalaina ny volamena rehefa avy nasiana izany ho sampan'ny heather.
Rehefa afaka 200 taona ny asa toy izany niova be ny tontolo. Nisy fitaovana be dia be nesorina ary nangonina tao an-dohasaha, norakofana ny fivoahan'ny rano voajanahary, noforonina ny farihy vokatr'izany ary teraka ny famolavolana tanimanga misy endrika hafahafa, natao batemy tampon'isa.
Raha tsy misy dikany aminao io ampahan'ny tantara io dia azonao atao ny mankafy ny fomba fijery fotsiny. Ho an'izay toerana tsara indrindra dia ny Fomba fijery Orellán, izay ao amin'ny tanàna misy an'io anarana io ihany, miaraka amin'ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehany no fotoana tsara indrindra hanaovana azy. Avy eo ampianao ny Ivotoerana fandraisana ireo mpitsidika izay no mety zotra mitsidika ny faritra, misy na tsy misy mpitari-dalana.
Ireo lalana ireo dia lava na lavalava kokoa, miankina amin'ny fahaliananao, ny toe-batanao, ny fotoanao, na dia mamporisika ny hanana farafaharatsiny aza izy ireo roa andro hahatongavan'ny fitsidihana. Misy làlana dimy azo atao: Làlana Perimetral, Làlana Valiñas, làlan'ny Farihy Sumido, làlambe manohitra sy làlan'ny tanàna.
Làlana Perimeter: ity no làlana lava indrindra ary noho izany no tsara indrindra raha manam-potoana ianao satria hitanao ny zava-drehetra. Manome fampahalalana momba ny fitrandrahana romanina, momba ny fomba namoronana ny faritra mando sy ny farihy amin'ny alàlan'ny fampiasana rano amin'ity fitrandrahana ity.
Làlan'ny Valiñas: Làlana malaza sy tsotra izay manohina ireo hevi-dehibe ao amin'ilay faritra toy ny lava-bato ao La Encantada sy La Cuevana, loharanon'ny Tía Viviana, tanànan'i Las Médulas, ny toeram-pitrandrahana, ireo hazo chestnut ...
Làlan'ny Farihy Sumido: miaraka amin'ny fotoana fohy dia làlana mety indrindra izay ahitana ny Mirador de Chao de Maseiros sy ny fomba fijery mahafinaritra ao aminy. Ny làlana dia mamakivaky farihy artifisialy maromaro, noforonin'ny rano nalain'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany sy ny fivoahan'ny fantsona na fanasana volamena. Raha ny marina, ny Farihy Sumido dia fantsona fanasan-damba, iray amin'ireo tambajotra 100 kilometatra, no nihady imbetsaka tao anaty vatolampy, izay namela ny rano hoentina avy any amin'ny tendrombohitra avo indrindra ary hotehirizina hitrandrahana any aoriana.
Làlan'ny tranokala: Azonao atao ny mampiasa azy io avy any Orellán na avy amin'ilay làlana mihitsy ary lalana mifameno mankany amin'ny lalana Perimetral. Ity lalana manokana ity dia manome antsika vaovao momba ny teknika manokana izay nampiasaina tamin'ny fitrandrahana romanina, ny "Rava Montium" na faribolana mifangaro.
Làlan'ny tanàna: Làlana iray izay mitondra antsika hiverina amin'ny fotoana, hatramin'ny fotoanan'ny Fanjakana Romanina, ary ny fiantraikan'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany teo amin'ny fiaraha-monina sy ny tany.
Na lalana inona na inona no safidinao, tsara tarehy ny tontolo ary mamela anao hiditra amin'ny tantara ary hisaintsaina ny fomba nanovan'ny hetsika ataontsika ny natiora azy. Ho an'ny tsara sy ny ratsy. Hahita rava romanina ianao nefa koa hazo kastnut lehibe sy zato, ohatra ny santionany sasany, enina taonjato ohatra. Hatsaran-tarehy. Araka ny efa nolazainay, Azonao atao ny misafidy ny hanao ilay fitsidihana samirery na manao ilay fitsidihana mitarika izay mety amin'ny kamio 4x4 na minibus.
Tsy misy fidirana tokana mankany Las Médulas fa tsara toerana ilay toerana. Eny tokoa, tsy misy fitateram-bahoaka ao anatin'io faritra ioAmin'ny fitateram-bahoaka dia tsy mahazo mankany Ponferrada amin'ny bus ao amin'ny orinasa AUPSA fotsiny ianao. Afaka mandeha any lamasinina ihany koa ianao.
Fampahalalana azo antoka momba an'i Las Médulas
Ny fitsidihana tsara indrindra dia amin'ny fararano, fotoana iray misy loko miloko tsy mampino.
Ny ivon-toerana fandraisana mpitsidika dia ao an-tanànan'i Las Médulas. Ny nomeraon-telefaoniny dia 987 420 708 619 258 355.
Ny ivon'ny Interpretation of the Canals dia ao amin'ny tanànan'i Puente Domingo Flórez. Ny nomeraon-telefaonin'izy ireo dia 987 460 371. Maimaimpoana ny fidirana.
Eo akaikin'ny Mirador de Orellán no Galería de Orellán. Ny vidim-pidirana 2 euro isaky ny olon-dehibe ary 1 isaky ny zaza.
Ny Classroom Archaeological dia ao Las Médulas, ao Carrucedo 2442. Ny laharan'ny telefaoniny dia 987 40 19 54. Vidiny: 2 euro isaky ny olon-dehibe ary 1,5 euro ho an'ny olona misotro ronono. Ny zaza hatramin'ny 8 taona dia tsy mandoa vola. Voalamina manomboka eto ny fitsidihana mitarika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » León » Las Médulas, Lova Iraisam-pirenena